अदालतले निकास नदिए जनताको अदालतमा जान्छौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संस्थापन पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले अहिलेको संवैधानिक संकटको निकास भएन भने जनअदालतको बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत संगठनहरुद्वारा शनिबार आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक संकट र निकास’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमको जनखबरदारी र अदालतबाट निकास खोजिरहेको उल्लेख गर्दैै दोश्रो विकल्पका रुपमा जनअदालतबाट जनताले फैसला गर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
उनले संविधानको रक्षापछि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढनुपर्ने बताउँदै ७ दशक लामो संर्घषको प्रतिफललाई कसैले उल्ट्याउन नसक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घोषित रुपमा संघीयताविरोधी रहेको बताउँदै संघीयतालाई भंग गर्न खोजेको दावी गरे।
प्रवक्ता श्रेष्ठले एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाका कारणले पनि देशमा संकट आउने गरेको बताए। अमेरिकामा एउटै व्यक्ति लगातार २ कार्यकालका लागि मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएका कारण राजनीतिक विकृति रहेको उल्लेख गरे।
यस्तै सबै दलमा पार्टीको नेतृत्वमा पनि एउटै व्यक्ति कति समयसम्म बस्ने तथा एउटै ब्यक्ति कति पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भन्नेबारेमा बहस हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘कतिसमय प्रधानमन्त्री हुने र पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पनि कति समय रहन पाउने हो यसबारे राष्ट्रिय रुपमा बहस गर्न आवश्यक छ।’
उनले अहिलेको राजनीतिक संकट समाधानका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर संसद सुचारु गरेर जानुपर्ने बताए। संसद पुनःस्थापनापछि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। यसका लागि सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कुनै चमत्कार नभए वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको बताए। ‘निर्वाचनका लागि कानूनी, राजनीतिक र प्राविधिक तयारी चाहिन्छ। हामीसँग कानूनी तयारी पनि पूरा भएको छैन। गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको ठूलो दल निर्वाचनबाहिरै रहने स्थिति देखिएको छ। निर्वाचनका लागि राजनीतिक परिस्थिति पनि सहज बनिसकेको छैन’ पोखरेलले भने, ‘चुनाव लड्ने खेलाडीहरु नै मैदानमा छैनन्। रेफ्री मात्र भएर खेल हुँदैन।’’
अन्तरक्रियाका अध्यक्ष नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको बताए। डा. देवकोटाले भने, ‘हामी राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कानूनको शासनको पक्षमा छौं। लोकतन्त्रमा निरंकुशता कुनै हालतमा मान्य हुन सक्दैन। तसर्थ, निरंकुशताको विरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा सबै बुद्धिजीवीहरुले खबरदारी गर्न जरुरी छ।’
Tagsनारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाल बुद्धिजीवी स‌ंगठन
नेकपा आधिकारिकता विवाद : कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी
पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज : ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ला ?